जसपामा विग्रहबीच प्रतिगमन र सहकार्यको विमर्श- विचार - कान्तिपुर समाचार
जसपामा विग्रहबीच प्रतिगमन र सहकार्यको विमर्श
मधेसी राजनीतिमा प्रतिगमनको धुन र सहकार्यको रागबीच नेताहरूबीचको पवित्र–अपवित्र सम्बन्धका विभिन्न पाटा छुट्टयाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको राजनीति भावनात्मक खेल होइन, यसमा त नाफा–नोक्सानको विशुद्ध सौदाबाजी हुँदो रहेछ ।
वैशाख २०, २०७८ तुलानारायण साह
नेपाली राजनीतिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को चर्चा एक्कासि बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अदालती विभाजनसँगै संसद्भित्र देखिएको सङ्ख्यात्मक उतारचढावका कारण जसपाको भाउ बढेको हो । पार्टीभित्र विग्रह पनि बढेको छ । एकीकरणपूर्वका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) का नेताहरू आ–आफ्नै समूहमा बाँडिएका छन् । महन्थ ठाकुरले राजपा र उपेन्द्र यादवले सपा समूहको नेतृत्व गर्दै छन् ।
रमाइलो के छ भने, नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूको विकल्पमा पहिचानवादी राजनीति गरेर वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ एकीकरण गरेका यी दुवै मधेसी नेताहरू अहिले आफ्ना लागि होइन, बरु कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि एमालेका केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिने सवालमा विवाद गर्दागर्दै विभाजनको डिलमा पुगेका छन् । सदनभित्र सांसदहरूको खोसाखोस हुनुअगावै जसपाभित्र त्यो खेल सुरु भइसकेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नै तर्क दिने गरेका छन् । उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनको नायक मान्छन् । त्यसकारण उनको विस्थापन चाहन्छन् । मधेस आन्दोलनको क्रममा सयौं कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थाल्ने वचन दिएका कारण महन्थ ठाकुरचाहिँ ओली सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् ।
जसपा विग्रहको सकारात्मक पक्ष के छ भने, मधेसी समाजमा प्रतिगमन र सहकार्यबारे विमर्श सुरु भएको छ । भावनात्मक रूपमा आन्दोलित समाजहरूले बितेको डेढ दशकमा कैयौं साना–ठूला आन्दोलन त गरे तर वैचारिक रूपमा संगठित हुन सकेका छैनन् । यस्तो बेला राजनीतिमा हुने प्रतिगमनको गणना, प्रतिगमनकारी नेता र पार्टीको पहिचान, कस्तो बेला कोसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सूत्रको खोजी थाल्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो ।
बितेको पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो र ओलीलाई प्रतिगमनका नायक भन्न थालियो । यसो भन्नेहरूमा उनका आफ्नै दलका उच्च नेताहरूदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरूसमेत रहेकाले मिडियाले सजिलै त्यस शब्दलाई स्थापित गराइदियो । सम्भवत: त्यही कारण नै जसपाभित्रको एउटा समूहले ओलीलाई मात्र प्रतिगमनको नायक मान्छ र उनको विस्थापनलाई चट्टानी मुद्दा बनाएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा ओली एक दिनमा उदाएका पात्र होइनन् । छ वर्षअघिसम्म उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष मात्र थिए । तर, २०७२ सालयताको राजनीतिमा उनी आफ्ना पार्टीको अध्यक्षबाट देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय र शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित हुन पुगे । अहंकार यति बढ्दै गयो, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हाँकिराखेकै बेला उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिएर सबैलाई चकित बनाए ।
ओलीलाई शक्तिशाली बनाउनमा सबै पार्टीका नेताहरूको उत्तिकै योगदान छ । सोह्रबुँदे सहमतिबाट ओलीको नयाँ राजनीतिक यात्राको थालनी भएको थियो । त्यति बेला संविधान निर्माण र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति एकसाथ भएको थियो । भनिरहनु परेन, सोह्रबुँदे सहमति कमरेड प्रचण्डका कारण सम्भव भएको थियो तर नेपाली कांग्रेस पार्टी र सभापति सुशील कोइरालाको पनि उत्तिकै योगदान थियो । जति बेला ओलीले मधेसी समुदाय र तिनको आन्दोलनलाई होच्याउनका लागि तल्लो स्तरका टुक्काहरूको संयोजन गर्दै थिए, त्यति बेला काठमाडौंका अधिकांश नेता, लेखक र मिडियाले उनलाई पृथ्वीनारायण शाहपछिको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादीको पगडी पहिर्‍याउँदै थिए ।
के सोह्रबुँदे सहमति मधेसीहरूका लागि प्रतिगमनको प्रस्थानविन्दु थिएन ? यदि थियो भने कमरेड प्रचण्डलाई के मान्ने ?
सोह्रबुँदे सहमतिपछि फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण थालिएको थियो । मधेसी दलहरूको मोर्चाले त्यसको विरोधमा अनेकौं आन्दोलन गर्‍यो । दर्जनौं मधेसीको हत्यापश्चात् जारी भएको नयाँ संविधानको श्रेय कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पाएका थिए । के संविधानको घोषणालाई मधेसी मोर्चाका सबै नेताले प्रतिगमन भनेका होइनन् ? त्यसो भए आन्दोलनकारी मधेसीले कांग्रेस पार्टी र सभापतिलाई प्रतिगमनको नायकका रूपमा सम्झिने कि अग्रगमनको अभियन्ताका रूपमा ?
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि मधेसमा आन्दोलन जारी थियो । लामो समय नाकाबन्दी चलेको थियो । दर्जनौं मधेसी सहिद भइसकेका थिए । ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । राजपाजस्ता मधेसवादी दलले बहिष्कार गर्दागर्दै दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो जसले विवादित संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन गरेको थियो । के प्रचण्ड सरकारको त्यो कदम मधेसी आन्दोलनकारीहरूका लागि प्रतिगमन थिएन ? त्यसको नायक कमरेड प्रचण्डलाई मान्ने कि नमान्ने ?
दसवर्षे जनयुद्ध र पटक–पटकको मधेस आन्दोलनको एक प्रमुख एजेन्डा थियो— निजामती सेवामा आरक्षण । २०६५ सालदेखि निजामती सेवामा आरक्षणको प्रारम्भ पनि भयो । तर, २०७६ सालमा ओली सरकारले स्थानीय तहका लागि झन्डै १० हजार सिटको विज्ञापन खुलाउँदा आरक्षिततर्फका करिब २ हजार सिट काटेर खुलातर्फ राखिएका थिए । उपेन्द्र यादव स्वयम् त्यस सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए । के सरकारको त्यो कदम समावेशीको आन्दोलन र सीमान्तकृत युवाहरूमाथिको प्रतिगमन थिएन ?
बितेका पाँच वर्षमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरू वा तिनको नेतृत्वका सरकारबाट अनेकौं यस्ता कार्य भएका छन् जुन मधेसी, जनजाति, दलितका लागि प्रतिगमन थिए । सीमान्तकृतहरूका विभिन्न समूहले त्यस्ताका विरुद्ध आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । तर, न तिनको आवाजको सुनुवाइ भयो न त ती घटनाहरू प्रतिगमनका रूपमा स्थापित हुन पुगे । प्रतिनिधिसभा विघटनको ओलीकर्म किन प्रतिगमनका रूपमा स्थापित हुन सक्यो ? किनभने मुख्य दलका उच्च नेताहरू, प्रभावशाली मिडिया र नागरिक आन्दोलनले एकसाथ प्रतिगमन भनिदिए ।
नेपालमा प्रतिगमन पनि थरीथरीका हुँदा रहेछन् । वर्चस्वशालीको प्रतिगमन र सीमान्तकृतको प्रतिगमन । वर्चस्वशालीको प्रतिगमन सबैले मान्ने तर सीमान्तकृतहरूको प्रतिगमनलाई सीमान्तकृतले मात्र देख्ने । अहिलेको प्रतिगमन कस्तो हो, सीमान्तकृतहरूको राजनीति गरेर वैकल्पिक शक्ति बन्न खोजेका जसपा नेताहरूबीच यसबारे बृहत् विमर्श हुनु जरुरी छ ।
जसपाभित्र अहिलेको विग्रहको एउटा कारण सहकार्यको सूत्रमा एकमत नहुनु पनि हो । महन्थ ठाकुरलगायत पूर्वराजपा समूह ओली सरकारसँग सहकार्यको पक्षमा देखिएको छ । सरकारले रेशम चौधरीलगायतका सवालमा सहयोग गर्ने, आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने, संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थाल्ने तथा सदनमा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा आफ्नो अनुकूल संशोधनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएका कारण ओलीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने ठाकुर पक्षको भनाइ छ ।
उपेन्द्र यादवलगायत पूर्वसपा समूहले ओलीको विस्थापनका लागि वैकल्पिक धारसँगको सहकार्यमा जोड दिएको छ । ठाकुर पक्षले उठाएका मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधनका मुद्दाबारे कुनै राजनीतिक सहमतिभन्दा पनि ओली प्रतिगमनका नायक रहेका कारण विस्थापन अनिवार्य रहेकाले वैकल्पिक गठबन्धनसँगको सहकार्य गर्नुपर्ने उसको ठहर छ ।
त्यसो भए यी दुवै पक्षको सहकार्यको पृष्ठभूमि के हो ? यी दुवै समूहका नेताहरूले आन्दोलनका बेला, निर्वाचनका बेला र सत्तारोहणका बेला गरेका सहकार्यहरूको विश्लेषण गर्दा सही तस्बिर देखिन सक्छ ।
२०६३ को माघमा मधेसमा ठूलो जनविद्रोह भयो । विद्रोह सबै ठूला दलका विरुद्ध थियो तर माओवादीविरुद्ध बढी आक्रामक देखिएको थियो । उपेन्द्र यादव त्यस विद्रोहका एकल नेता थिए । ठूला दलहरूले सुरुमा यादवलाई नेता मान्नै चाहेका थिएनन्, कुनै प्रकारको सहमति गर्नै रुचाएका थिएनन् । आठ महिनापछि बाइसबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा कुनै ठूला नेताले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । तत्कालीन शान्ति तथा पुन:स्थापना मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले त्यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमति गरिएको कुनै पनि कुरा सम्बोधन नगर्दै सरकार ठूला दलहरूको समर्थनमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन अग्रसर भएको थियो ।
उपेन्द्र यादवको व्यक्तित्व र बाइसबुँदे सहमति दुवै सङ्कटमा परेका थिए । यादवले राजेन्द्र महतोको सानो सद्भावना पार्टीसँग सहकार्य गरेर मधेसी मोर्चा बनाए । लगत्तै नवगठित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) लाई मोर्चामा सामेल गराइयो । महन्थ ठाकुरलाई आन्दोलनको नेता बनाइयो । आन्दोलनले काठमाडौं र मधेसबीच कडा धु्रवीकरण गराएकाले राज्यपक्ष दबाबमा पर्‍यो । आठबुँदे सहमति भयो जसमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला एवं मोर्चाका ठाकुर, महतो र यादवले हस्ताक्षर गरे । साक्षीका रूपमा माधव नेपाल र प्रचण्डको उपस्थिति थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मधेसी दलहरू निकै कमजोर भएका थिए । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । संविधानसभाभित्र दबाबका लागि मधेसी दलहरूले माओवादीसँग सहकार्य गरेका थिए ।
महाभूकम्पपछि प्रचण्डले सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । मधेसी मोर्चा एक्लैले आन्दोलन जारी राखेको थियो । आन्दोलनका क्रममा महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका सदस्यहरूले संविधानसभा त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । संविधानको घोषणासँगै मधेसी मोर्चाले एकैस्वरमा नाकाबन्दीको घोषणा गरेको थियो । तर लगत्तै भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीसहितका मधेसी दलका माननीयहरूले सुशील कोइरालालाई मत दिएका थिए । मधेसमा आम हडताल, नाकामा बन्दी गरेर काठमाडौंमा किन भत्ता खाएको र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गरेको भनी प्रश्न गर्दा तिनै मधेसी नेताहरूले एकसाथ भनेका थिए, ‘ओलीलाई पराजित गर्नका लागि हामीले मतदानमा भाग लिएका हौं ।’
केही महिनापछि प्रचण्ड र ओलीबीच विवाद बढ्दै गयो । ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम मधेसी मोर्चाबाट बाहिरिएर निर्वाचनमा सहभागी भयो । मोर्चाका बाँकी दलहरू मिलेर राजपा पार्टी बन्यो । राजपाले बाध्य भएर तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो । अधिकांश स्थानीय तहमा फोरम र राजपाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएपछि लगत्तै भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुवै पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भयो । फोरम र राजपाबीचको काटाकाटको सम्बन्ध रातारात मायाप्रीतिमा बदलियो । केही ठाउँमा कांग्रेससँग पनि गठबन्धन भयो । सुनसरीमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई फोरमले सघायो भने सप्तरीमा उपेन्द्र यादवलाई र महोत्तरीमा महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसले । त्यस्तै, धनुषामा राजेन्द्र महतोलाई एमाले र माओवादी दुवैले परोक्ष रूपमा सघाएको चर्चा थियो ।
चुनावपछि प्रदेश २ मा फोरम–राजपा गठबन्धनको सरकार बन्यो भने केन्द्रमा माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार । पछि प्रचण्डको प्रयासमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा फोरम पार्टी ओली सरकारमा सामेल भयो । सत्ताको राजनीतिमा यादव जहिले पनि प्रचण्डकै साथ रहने गरेको यथार्थ त्यसअघिका दुई पटकको सत्ता समीकरणमा पनि देखिएको थियो । पहिलोपटक २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा र पछि प्रचण्डको सहयोगमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा यादव सामेल भएका थिए ।
माथि उल्लिखित सबै प्रकरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, आन्दोलनका बेला मधेसी दल र तिनका नेताहरूबीच सहकार्य भइहाल्दो रहेछ । निर्वाचनमा कोसँग मिल्दा जितिन्छ, तिनैसँग घोषित वा अघोषित रूपमा सहकार्य हुँदो रहेछ । सत्ता राजनीतिमा पनि खासै स्पष्ट मापदण्ड छैन, तर प्रचण्डसँग उपेन्द्र यादवको अटुट सहकार्य देखिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक ओली र प्रचण्डबीच नेकपाभित्र खटपट सुरु हुनासाथ सरकारमा ओली र यादवबीच पनि खटपटको समाचार सार्वजनिक हुन थाल्नुलाई केवल संयोग मान्न सकिँदैन ।
अहिलेको सत्ता समीकरणमा यादवले देउवालाई सघाउन खोजेको जस्तो देखिए पनि खासमा प्रचण्डलाई सघाउन चाहेका हुन् । त्यसैले मधेसी राजनीतिमा प्रतिगमनको धुन र सहकार्यको रागबीच नेताहरूबीचको पवित्र–अपवित्र सम्बन्धका विभिन्न पाटा छुट्टयाएर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको राजनीति भावनात्मक खेल होइन, यसमा त नाफा–नोक्सानको विशुद्ध सौदाबाजी हुँदो रहेछ ।
(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)
प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ २०:२३
प्रश्न गर सपना !
राज्यमा रहेका विकृतिहरूमाथि प्रश्न गर्नेले आफ्नै परिवार, समाज, धर्म, परम्परा र रीतिरिवाजमा थोपरिएका असमानताहरूमाथि पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । पीडितहरूले प्रश्न नगरी पीडकलाई कसरी महसुस हुन्छ ?
फाल्गुन १०, २०७७ तुलानारायण साह
बृहत् नागरिक आन्दोलनले हालै काठमाडौंमा गरेको महिला मार्च अनेक कोणबाट ऐतिहासिक रह्यो । अभियन्ता हिमा विष्ट र सपना सञ्जीवनीका भनाइहरू विशेष रूपमा चर्चित रहे । दुवै जनाको हरेक शब्दमा गहिरो पीडा थियो, विद्रोहको दृढता झल्किन्थ्यो । जनकपुरकी सपनाले मैथली भाषामा कविता पढेकी थिइन्, जसमा उनले सानैदेखि सुनिआएका आफ्नै समाजका परम्परा, कथा र किंवदन्तीहरूमा गढिएका महिला पात्रलाई महिला–पुरुष समानताको लेन्सबाट हेर्ने प्रयास गरेकी थिइन् ।
मार्चको सभामा र काठमाडौंका मिडियामा उल्कै चर्चा पाएको त्यो कविताबारे मधेसबाट भने फरक प्रतिक्रिया आयो । कतिपय पढे–लेखेका मधेसीहरूले पनि मन नपराएको सुनियो । छद्मवेशी साइबर सेनाले सपनालाई हिन्दु धर्मविरोधीकै बिल्ला भिराइदियो । धर्मभीरुहरूले त्यस दिनको मञ्चमा सहभागी मात्र भएका, धर्मबारे केही पनि बोल्दै नबोलेका अन्य अधिकारकर्मीलाई पनि दपेट्ने प्रयास गरे । सपनालाई हालसम्म पनि विभिन्न थ्रेट आइरहेकै छन् । त्यसकारण यस प्रकरणबारे थप विमर्श हुनु जरुरी छ ।
स्वाभाविक कि रणनीतिक ?
समग्र प्रकरणलाई दुई कोणबाट हेर्नु जरुरी छ । पहिलो, यो तरंग क्षणिक हो कि रणनीतिक हिसाबले उठाइएको हो ? दोस्रो, यस्ता तरंगहरू बेलाबेला मधेसमै किन उठिरहन्छन् ?
पहिलो कुरा, यस तरंगमा दुई पक्ष मिसिएका छन्— स्वाभाविकता र रणनीति । सदियौंदेखि चलिआएको परम्परालाई आम मानिसले बिनाकुनै प्रश्न अपनाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसकारण सपनाले रामायण र महाभारतका पात्रहरूका खासखास प्रसंगमा जसरी प्रश्न गर्दै प्रतिकारको सन्देश दिएकी छन्, त्यसबाट केही व्यक्ति असहज र तरंगित हुनुलाई एक हदसम्म स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । अहिलेको प्रसंगमा त्यो पनि भएकै हो तर त्यति मात्रै भएको होइन । यसमा केही खास रणनीतिक पक्ष पनि लुकेका छन्, जुन वाचन गरिएको कविताका शब्द र भाषाभन्दा पनि महिला मार्च आयोजना गर्ने बृहत् नागरिक आन्दोलनको लक्ष्यसँग सम्बन्धित छन् ।
विगतमा पनि राज्यको संरचना र शासकहरूमाथि प्रश्न गर्दै हुने गरेका अनेक आन्दोलनमाथि लाञ्छना लगाउने प्रयास नभएका होइनन् । २०६२/६३ सालयता संविधान निर्माणको राजनीति अगाडि बढ्दै गर्दा सीमान्तकृत समुदायहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन चलाउँदा अनेक आरोप लगाइएकै थिए । त्यस्ता प्रकरणमा बुझ्नैपर्ने केही महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् । पहिलो, त्यस्ता आन्दोलनले उठाएका मुद्दाबारे षड्यन्त्रकारीहरू मौन बसिदिने तर आन्दोलनका अगुवाहरूमाथि व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने प्रकारले आक्रमण गर्ने । अधिकांश त्यस्ता आन्दोलनलाई प्रायोजित वा विदेशीको इसारामा भएको भनिदिने र आम मानिसमा भ्रम सिर्जना गर्ने । दोस्रो, अगुवाहरूमाथि आक्रमण गर्नका लागि त्यही समुदायका अनुहारहरूको प्रयोग गर्ने ।
विगतमा भएका जनजाति र मधेसी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूमाथि कसैले खासै प्रश्न गर्न सकेको थिएन, तर ती आन्दोलनलाई विदेशीको इसारामा भएको भनेर सत्तोसराप गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएन । त्यसका लागि सीमान्तकृत समुदायकै अनुहारहरूलाई अगाडि बढाइएको थियो । त्यस्ता अनेक जनजाति र मधेसी अनुहार आफ्नै आन्दोलनलाई सरापेर राज्यद्वारा पुरस्कृत भएको हामीले देखेकै छौं । तसर्थ अहिले सपनाको कवितालाई लिएर मधेसीहरूबाट जुन प्रकारको धम्कीपूर्ण आक्रोश पोखिँदै छ, त्यसलाई सामान्य तरिकाबाट क्षणिक आवेग मात्रै पोखिएको नभई प्रतिगमनविरुद्ध जारी बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई नरुचाएका पक्षहरूको रणनीतिले पनि काम गरेको रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । यो आन्दोलनलाई जबर्जस्ती धार्मिक रङ दिन खोजिएको छ ।
यस्ता तरंगहरू बढीजसो मधेसमै किन उठ्ने गर्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नलाई मधेसमा समाज, राज्य, राजनीति र धर्मबीचको अन्तरसम्बन्धबारे खोतलखातल गर्न जरुरी छ ।
हिन्दु धर्मावलम्बीहरू मधेसमा पनि छन् र पहाडमा पनि । तर, यी दुई क्षेत्रका हिन्दुहरूमा अनेक भिन्नता छन् । मधेसका हिन्दुहरूले मनाउने चाडबाड, बिहेबारीको संस्कृति, महिला–पुरुष सम्बन्ध र श्रम विभाजन पहाडको भन्दा फरक छ । मधेस र पहाडमा दसैं–तिहार मनाउने विधिमा व्यापक भिन्नता छ । त्यस्तै, पहाडका हिन्दु समुदायमा ससुराले ज्वाइँलाई ढोग्ने तर मधेसमा ज्वाइँले ससुरालाई ढोग्ने चलन छ । त्यस्तै परिपाटी मामा–भान्जाबीच पनि छ । पहाडको हिन्दु समाजमा अन्तरजातीय र प्रेम विवाहको चलन निकै पुरानो छ । महिलाको सवालमा पहाड तुलनात्मक रूपमा उदार देखिन्छ भने मधेस निकै अनुदार । यसले दुवै समाजमा महिला–पुरुषबीचको लैंगिक सम्बन्ध र पितृसत्ताको रूप देखाउँछ । नेपाली समाज समग्रमा पितृसत्तात्मक र ब्राह्मणवादी त छँदै छ, तर मधेसमा त्यसको कट्टरता ज्यादा छ । त्यसकारण धर्मको हिसाबले एउटै हिन्दु भनिए पनि मधेस र पहाडका सामाजिक चलन, संस्कृति र सम्बन्धहरू फरकफरक छन् । यसबारे अमेरिकी समाजशास्त्री फ्रेडरिक गेज र नेपाली चिन्तक आहुतिले केही लेखेका छन् ।
मधेसी समाज उत्तर भारतीय समाजबाट बढी प्रभावित छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण मधेसमा उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता भारतीय प्रान्तहरूको प्रभाव पर्नुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । भारतीय समाजमा पनि हिन्दुहरूको बाहुल्य त पुरानै कुरा हो तर सन् १९९० को दशकमा अयोध्या काण्डपछि जब धर्म र राजनीतिबीच नयाँ सम्बन्धको रचना गर्न थालियो । दुई दशकयता नेपालमा पनि अनेक आन्दोलन भए । माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन र मधेसीलगायत सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन । मधेसमा दुवैतर्फको प्रभाव परेको छ । संयोगले नेपालमा भएका आन्दोलनहरूले पुराना सम्बन्धहरूमा उदारता खोजेको देखिन्छ भने भारतमा सुरु भएको धर्मका नामको राजनीतिले पुराना सम्बन्धहरूको निरन्तरता र कट्टरता । यस्तो अवस्थामा मधेसी समाज नयाँ प्रकारले चेपुवामा परेको भान हुन्छ ।
माओवादी आन्दोलनले जातीय, लैंगिक, वर्गीय सम्बन्धमा गुणात्मक उदारता खोजेको थियो; सदियौंदेखि शासित रहेका समुदायलाई जागृत बनाएको थियो । मधेस आन्दोलनले शासक–शासित सम्बन्धमा परिवर्तन खोजेको थियो । जनजाति आन्दोलनले राज्यद्वारा लादिएको जातीय र सांस्कृतिक सम्बन्धमाथि प्रश्न गरेको थियो भने, दलितहरूले जातीय एवं वर्गीय सम्बन्धमा गुणात्मक बदलाव खोजेका थिए । यी सबै पक्षमा थोरबहुत परिवर्तन भएको पनि छ जुन अग्रगमनको राजनीतिक आन्दोलनबाट मात्र सम्भव भएको हो, जहाँ धर्मबारे निरपेक्षताको वकालत थियो । दक्षिणतर्फको राजनीतिक गतिविधि फरक प्रकारले अगाडि बढेको छ । त्यसको पनि प्रभाव मधेसमा परेकाले धार्मिक कट्टरताको आवाज सुन्न थालिएको छ । यस्तो आवाज बोल्नेहरूले अहिले धर्मनिरपेक्षताको मात्र विरोध गरेको जस्तो देखिएला तर कालान्तरमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता लगायतका सबै उपलब्धिका लागि यो विष साबित हुने निश्चित छ । सबै विषय अन्तरसम्बन्धित छन् । सपनाको कविताले काठमाडौंमा वाहवाही पाउनु तर मधेसको एउटा तप्काबाट चर्को विरोध आउनुलाई यही परिदृश्यमा हेर्नुपर्छ ।
प्रश्न गर सपना
गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप, धाकधम्की यी सबै कुरा विमर्शयोग्य त छन्, तर त्यति महत्त्वका होइनन् । मधेसी समाजमा सपनाजस्ती एक जुझारु युवतीमा हिम्मत पलाउनु यो पंक्तिकारलाई सर्वाधिक महत्त्वको विषय लागेको छ । यहाँ धेरै सपना जन्मिन बाँकी छन् ।
नेपाल तुलनात्मक रूपमा ढिलो गरी खुला भएको समाज हो । त्यसैले हामीकहाँ खुला समाजमा हुने बहसहरू शैशव अवस्थामै छन् । पितृसत्ता भारतीय समाजमा पनि छ तर त्यहाँ प्रश्न गर्नेहरू पनि धेरै छन् । भारतमा प्रश्नमा भावना मात्र होइन, बलिया तर्कहरूसमेत उठ्नुको सम्बन्ध शिक्षाको इतिहाससँग छ । ब्राह्मणवाद भारतीय समाजमा पनि जब्बर नै छ तर त्यसबारे प्रश्न गर्नेहरू पनि त्यही समाजमा बढी छन् । नेपाली समाजभन्दा भारतीय समाजमा आधारभूत भिन्नता के देखिन्छ भने, त्यहाँका जातीय, राजनीतिक र शैक्षिक सम्भ्रान्तहरूमा पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद र जातीय विभेदबारे निकै अगाडिदेखि केही हदसम्म उदारता पलाएको छ; नेपालमा त्यसको अभाव छ ।
त्यसैले नेपाली समाजमा हालै मात्र पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानबारे बहस सुरु भएको छ । उनको दिव्योपदेश साँच्चिकै उनैले लेखेका थिए कि पछि अरू कसैले लेखेर प्रचारमा ल्याएका हुन् ? भानुभक्त आचार्य कसरी आदिकवि भए भन्ने बहस पनि हालै मात्र सुरु भएको छ । नेपालको राज्य संरचना र राजनीतिमा महिला, मधेसी, जनजाति, दलितहरू राज्यका नीति–नियमका कारण पनि पछाडि परेकामा अहिले पनि एकमत भइसकेको छैन । तर, यो वैचारिक द्वन्द्वको लडाइँ जारी छ । कुनै बेला सपनाजस्तै युवाहरूको मनमा प्रश्न उठेर यस्ता बहसहरू सुरु भएका थिए । नेपालको राज्य संरचनामाथि प्रश्न गर्ने मधेसीहरू आफ्नै समाजका संरचना र परम्पराहरूमाथि कसरी प्रश्न नगरी बस्न सक्छन् ? के मधेसी समाजमा महिलामाथि विभेद छैन ? के त्यहाँ दाइजोका नाममा, भ्रूण हत्या र यौन हिंसाबाट महिलाहरू दिनानुदिन प्रताडित हुनुपरेको छैन ?
म स्वयं त्यही समाजको एक सदस्य हुँ । म जुन परिवारमा हुर्कें, जुन समाजमा पालिएँ, त्यस परिवार र समाजमा मजस्ता अनेक पुरुषले आफ्नै परिवारका महिलालाई पनि विभेद गर्ने गरेको देखेको छु । थाहै नपाई म आफैं कसरी पितृसत्ता र ब्राह्मणवादी सोचको वाहक भएको थिएँ, अहिले आएर थाहा पाउँदा ग्लानि हुन्छ ।
त्यसकारण राज्यमा रहेका विकृतिहरूमाथि प्रश्न गर्नेले आफ्नै परिवार, समाज, धर्म, परम्परा र रीतिरिवाजमा थोपरिएका असमानताहरूमाथि पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । पीडितहरूले प्रश्न नगरी पीडकलाई कसरी महसुस हुन्छ ?
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ १९:४४